Best Sesamol (533-31-3) poda Mugadziri - Cofttek
Cofttek ndiyo yakanakisa Sesamol poda inogadzira muChina. Fekitori yedu ine yakakwana yekugadzira manejimendi system (ISO9001 & ISO14001), iine pamwedzi yekugadzira inokwana 360kg.
Sesamori (533-31-3) Specifications
Molecular Kurema: 138.12 g / mol
Melt Point: 62 kusvika 65 ° C
Dhikirai: 121 kusvika 127 ° C
Kemikari zita: 1,3-benzodioxol-5-ol
InChI Key: Luszgtfnydarni-uhfffaoyssa-n
Solubility: Inonyungudika mumvura
Application: Sesamol, iyo zvinovaka muviri phenolic antioxidant komputa yakafumiswa muSesame mhodzi, yakaratidzirwa kuve inogona kuita anticancer zviitiko.
Kuonekwa: chena kusvika off-chena chekristasi poda
Sesamori (533-31-3) NMR Spectrum
Chii chinonzi Sesamol (533-31-3)?
Sesamol chinhu chinonzi phenolic chinowanikwa mune mbeu yesesame uye sesame mafuta uye inoonekwa sechinhu chikuru che antioxidant mumafuta, kudzivirira kuora kwemafuta. Izvo zvakare zvinogona kudzivirira kuora kwemafuta nekuita sey antifungal. Sesamol inononoka kusungunuka mumvura, asi inonzwisisika nemafuta mazhinji.
Sesamol powder inotorwa kubva kuSesamol mbeu ine matani ekugona kupa akasiyana mabhenefiti kune vashandisi. Iyi poda ine antioxidants, iyo inodzivirira mafuta kukanganisika nekuita seyunifungal uye inodzivirira muviri wako kubva mukukuvara kwemahara radicals. Mafuta eSesame anoshandiswa zvakanyanya mumushonga weAyurveda kuporesa nyaya dzinoverengeka dzehutano pasina mhedzisiro. Iri simba rine akati wandei mafiracological zvivakwa zvinosanganisira antioxidant, anti-kupisa, uye neuroprotective zvivakwa. Sesamol, iyo zvinovaka muviri phenolic antioxidant komputa yakafumiswa muSesame mhodzi, yakaratidzirwa kuve inogona kuita anticancer zviitiko.
Sesamol (533-31-3) mabhenefiti
Antioxidants ndiwo makomputa anodzivirira kana kunonoka kukuvara kwemasero anokonzerwa nemahara radicals. Mahara radicals anowanzo kutungamira kune oxidative kusagadzikana iyo yave yakabatana nekukonzera kuzvimba uye kumwe kusagadzikana. Sesamol antioxidant inowanikwa mune sesame mafuta uye inoita basa rakakosha mukudzivirira maseru kubva mukukuvara kweiyo oxidative.
Mune ongororo ye makumi matatu echirume Wilstar albino makonzo, Isoproterenol (boka reIO) raishandiswa kukonzera kukuvara kweiyo oxidative myocardial Sesame oiri yakapihwa nemuromo pa30 uye 5 ml / kg uremu hwemuviri yakaratidza simba rekudzivirira reSesamol kuburikidza nekuderera kwetiobarbituric acid inoshanda chinhu (TBARS) uye yakawedzera iyo inoguma antioxidative chiitiko.
Hutachiona hutachiona hutachiona hunogona kuwanikwa chero kwese. Zvinogona kubatsira kana kukuvadza zvichitungamira mukuvhiringidzika kwakadaro pneumonia, urini turakiti kutapukira pakati pezvimwe zvirwere. Sesamol ine anti-bhakitiriya mhedzisiro iyo inoita kuti ive inobatsira.
Zvidzidzo zvakaratidza iyo antimicrobial basa reS Sesamol poda kupesana nehuwandu hwehutachiona uye fungal pathogens.
Kupisa simba inzira inobatsira yekudzivirira kwemuviri kuzvinhu zvekunze hutachiona, kukuvara pamwe nehupfu hunobatsira mukurapa. Nekudaro, kuzvimba kusingaperi kunoitika kana muviri ukaramba uri mune ino nyevero kwenguva yakareba kunogona kukanganisa muviri.
Sesamol yekuwedzera inozivikanwa kuve neanogona anti-anogumbura zvivakwa.
Mune kudzidza nemakonzo, Sesamol supplementation inonzi yakaderedza systemic lipopolysaccharide (LPS) -asimudzira kuputika kwemapapu kuburikidza nekuvharidzira kupindura kwealveolar macrophage kupindura mumakonzo. Sesamol yakatungamira kuderera kwekukuvara kwemapapu uye edema.
Bundu rinoreva kuwanda kwematehwe anokonzerwa nekukura kwemaseru masero (masero anokura uye muviri haudi uye kusiyana neyakajairika masero haafe). Kunyangwe isiri mabundu ese ane kenza, zvakakodzera kuti ubvise pazvinogoneka.
Vakawanda vanoongorora vakaudza kuti Sesamol ine zvimwe zvinodzivirira cancer. Sesamol yakaratidzwa kuratidzira apoptosis mumasero akasiyana ekenza.
Zvidzidzo zveSainzi zvakaratidza kuti Sesamol inotungamira kuiswa kweapoptosis mumasero echiropa chevanhu kenza nekuvhiringidza iyo membrane inogona, saka mitochondrial dysfunction.
Kushupika kweropa chinowanzoitika chinogona kukonzera kusagadzikana senge chirwere chemoyo (CVD), chirwere cheitsvo uye kurohwa.
Uchapupu hwakagadzwa pamusangano wepagore weAmerican moyo Association wakaratidza kuti Sesamol inokwanisa kudzora kweropa. Chidzidzo ichi chaisanganisira vakadzi zana nemakumi matatu nevarume 133 vane hypertension. Mushure mekuiswa pasi peSesamol supplement kwemakumi matanhatu ezuva, yavo zvinoreva ropa rikawira mukati meyakajairika.
Sesamori (533-31-3) tizvishandise?
Yakakwirira mune antioxidants
Ine yakasimba yekudzivirira-kuzvimba zvinhu
Kunaka kwemoyo wako
Ngavabatsire kudzora shuga yeropa
Inogona kubatsira kurapa arthritis
Mai batsira kuporesa maronda uye kupisa
Ngavadzivirire kubva UV UV rayi
Dai yavandudza kurara kunaka.
Runyoro rwechinyorwa runogona kudzoreredza kurwadziwa.
Ngavandudze hutano hwebvudzi.
Sesamori (533-31-3) kunyoresa
Sesamol isiko yakasikwa organic inoitawo chikamu cheesame oiri. Sesamol yakawanikwa kuti iri antioxidant inogona kudzivirira kupambwa kwemafuta, uye inogona kuchengetedza muviri kubva mukukuvara kubva kumahara radicals. Izvo zvinogona zvakare kudzivirira kupambadza kwemafuta nekuita seyakavharwa. Sesame mafuta anoshandiswa muAyurvedic mushonga uye sesamol inogona kutora chinzvimbo chakakosha mundima ino yechinyakare. Sesamol inove nehuwandu hwehuwandu hwemishonga inosanganisira anti-immune, antioxidant, uye neuroprotective zvinhu. Sesamol pretreatment inopa radioprotection uye inodzivirira radiation inokonzeresa chromosomal aberrations muropa revanhu lymphocyte.
Sesamol powder Sale(Kupi Kwekutenga Sesamol powder muhuwandu)
Isu tiri nyanzvi Sesamol poda mutengesi wemakore akati wandei, isu tinopa zvigadzirwa nemakwikwi emutengo, uye chigadzirwa chedu chemhando yepamusoro uye chinoedzwa chakasimba, chakazvimirira bvunzo kuyedza kuti ive yakachengeteka kuti ishandiswe pasi rese.
 Wynn, James P.; Kendrick, Andrew; Ratledge, Colin. "Sesamol sechinodzivirira kukura uye lipid metabolism muMucor circinelloides kuburikidza nekuita kwayo pane enzyme yemalic." Lipids (1997), 32 (6), 605-610.
 Ohsawa, Toshiko. "Sesamol uye sesaminol se antioxidants." Nyowani Chikafu Indasitiri (1991), 33 (6), 1-5.